चितवनमा छिमेकीको कुटपिटबाट यसरी भयो दलित व्यक्तिको मृत्यु - Narayanionline.com
चितवन, असोज ३१ –
चितवनमा छिमेकीको कुटपिटबाट दलित समुदायको एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–४, स्थित भीमबहादुर विश्वकर्माको छिमेकीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको हो । छिमेकी सीताराम बस्नेत र दीलिप श्रेष्ठले कुटपिट गर्दा ५८ वर्षीय भीमबहादुरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी नरहरि अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
दशैँको अघिल्लो दिन भीममाथि कुटपिट गरिएको छिमेकीले बयान दिएका छन् । मधुमेह रोगी भिमले मादक पदार्थ सेवन गर्न केही वर्ष अघि नै छाडेका थिए । गाउँघरमा मिस्त्री काम गर्दै आएका भीमले परिवारको जिम्मेवारी आफैँ सम्हाल्दै आएका थिए । त्यो दिन बिहानको ९ बजे घरमा पाहुनाको करले भिमले थोरै भए पनि मादक पदार्थ भने सेवन गरेका थिए । सोही बेला उनैले हुर्काउदै आएका नातिको घरमा सम्पत्तिको बारेमा कुराकानी गर्न पुगेका थिए । तर हजुरबुबाले मापसे गरेको थाहा पाएपछि नाती कुरा नगर्दै बाहिर निस्किए । त्यसपश्चात कान्छा नातिलाई हातमा समातेर भिम दीलिपको फार्मेसी तर्फ लागेका थिए । फार्मेसीमा भीम कहिलेकाँही बिरामी पर्दा औषधि, उपचारको लागि जाने गरेकोे छिमेकीहरु बताउँछन् । दीलिपले औषधि मात्रै बेच्ने भए पनि भीमले भने बिरामी जाच्ने डाक्टरको रुपमा नै सम्बोधन गर्दथे । दीलिपको फार्मेसी नजिकै सीतारामको पनि घर छ । हल्का मादक पदार्थ सेवन गरेकाले पनि भीम आफ्नै कुरालाई लिएर कराईरहेका थिए । सो क्रममा उनले सीताराम र दीलिपको बारेमा पनि केही बोल्न भ्याए । त्यसपश्चात अश्लील शब्द बोलेको कारण भीमलाई प्लाष्ट्रिकको पाइपले सीतारामले कुटेको स्वीकार गरेका छन् । त्यस्तै दीलिपले पनि आफूलाई तथानाम गालीगलौज गरेका कारण आफूले कुटपिट गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ । भिमले मापसेको बेला दुःखका कुराहरु मात्रै बोल्दै आएको तर अश्लील शब्दहरु नबोल्ने गरेको छिमेकीहरुको भनाई छ ।
कुटपिट भएको केही समयमा भीम अचेत अवस्थामा ढलेका थिए । त्यसपछि पीडक सीतारामले नै भीमलाई अस्पतालको लागि एम्बुलेन्स लगे । अस्पताल लैजाने क्रममा भीमका कान्छा ज्वाई विकास विश्वकर्माले घटना बारे थाहा पाएका थिए । अचेत अवस्थामा ढलेका भीमलाई भरतपुर अस्पताल लैजाने भनिए पनि चितवन मेडिकल कलेजमा पु¥याईएको थियो । तर केही समयमा नै चिकित्सकले भीमको मृत्यु भएको घोषणा गरेको थियो । भीमको माईली छोरीले सिएमसीमा सीतारामको आफन्त भएकोले त्यहाँ लगेपछि घटना लुकाउन सकिने भनेर सरकारी अस्पताल नलगिएको आरोप लगाएकी छन् । भीमको मृत्यु भएपछि त्यसबेला सीतारामले कुटपिट गरेको स्वीकार गरेका थिएनन् । दीलिपले सीतारामले पनि भीमलाई कुटपिट गरेको आफूले पनि धकेले बयान दिएपछि मात्रै सीतारामले स्वीकार गरेका थिए ।
भीमको कुटपिटपछि टाउकोको पछाडी भागमा चोट लागेको पोष्र्टमार्टम रिपोर्टमा देखिएको छ । दीलिप र सीतारामको कुटपिटबाट नै भीमको मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि आफन्तहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा ज्यान मार्ने कसुरमा जाहेरी दिएका छन् । मृतकका आफन्तले दिएको जाहेरी चितवन प्रहरीले दर्ता गरिसकेको छ भने प्रहरीले पनि अनुसन्धान थालेको छ । घटनाबारे सिसिटिभि फुटेज पनि सुरक्षित रहेको प्रहरी प्रवक्ता नरहरि अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र दोषीमाथि कडा कारबाही हुने अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
आफन्तले जाहेरी दर्ता गराएपछि अनुसन्धानका लागि दीलिप र सीताराम दुवैलाई प्रहरीले पक्राउ गरि हिरासतमा राखिएको छ । सोही घटनालाई लिए आइतबार पीडित परिवार, जनप्रतिनिधिसहित छिमेकीले प्रहरी कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए ।
तस्बिर :मृतकको परिवार
2 प्रतिक्रिया on “चितवनमा छिमेकीको कुटपिटबाट यसरी भयो दलित व्यक्तिको मृत्यु”
सुशील देवकोटा says:
यो समाचार सत्य तथ्यमा आधारित होला म मान्छु । तर यो समाचारको शिर्षकमा “दलित” शब्द लेख्नैपर्ने आवश्यक्ता के भयो ?? समाजमा जातीय भावना भडकाउन ? कि, कुनै जातीवादी एनजिओ बाट डलर निकाल्न ? शिर्षकमा दलित शब्द नराखेर पनि यो समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिन्थ्यो नि ! संचार माध्यमले समाचारलाई सनसनीपूर्ण बनाउने प्रयास गर्नुलाई गलत नमान्ने हो भने पनि प्रेषित समाचारले समाजलाई कुनै गलत दिशा तर्फ त धकेल्दैन भन्नेमा सजग रहनैपर्छ र यो समाचारमा तपाईं सम्पूर्ण रुपमा चुक्नु भएको छ ।
एउटा मानिस मन्दिरजाँदा अर्काे मानिसले बर्बर अाक्रमण गरि मार्दछ । थुईक्क जात व्यवस्था ।
चितवनमा कोरोना संक्रमणबाट आज दुई जनाको मृत्यु, १०४ संक्रमित थपिए, १८ जना डिस्चार्ज
फागुनसम्म कान्ति लोकपथको काम सक्न मन्त्री नेम्वाङको निर्देशन
विद्यापीठको उद्घाटन नगरी फर्किए शिक्षामन्त्री पोखरेल
एसीसी इस्टर्न रिजनः मलेसियासंग नेपाल २२ रनले पराजित